Meelaha kale ee casriga ah ee Kocaeli | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliGudbinta Casriga ah ee Kocaeli kale
Gudbinta Casriga ah ee Kocaeli kale
15 / 08 / 2019 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Gobolka Marmara, TURKEY
habeen kale oo casri ah
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo maalgelin weyn ku sameysay gaadiidka, waxay sii wadaysaa hirgelinta mashaariic muhiim ah si loo fududeeyo isu socodka dadka lugeynaya iyo sidoo kale socodka gaadiidka. Deegaanka Izmit degmada Kabaoglu Degmada Prof.Dr. Dr. Wadada lugta ee laga dhisayo Baki Komsuoğlu Street ayaa kamid ah mashruucan. Kooxo ka tirsan Waaxda Arimaha Sayniska ee Dowlada hoose ee la soo gabagabeeyey shaqada xumada ee xad-dhaafka casriga ah, ayaa lasiiyay adeegga muwaadiniinta.
TARTAN RUN IYO DIIWAAN GELINTA DIIWAANKA
Daboolida wajiga iyo warshadaha wiishashka ayaa lagu dhammeystirey dar-dar galinta si ay u siiso gaadiid aamin ah dadka gobolka. Dusha sare ee birta halkaas oo ay ku dhammeeyeen rakaabka dadka lugaynaya ee lugeynaya buundada dhexdeeda, waxaa la hirgaliyey waddo-orodka orodka ah ee ka sameysan walxaha aan sibxashada lahayn. Waxaa lagu dhisay muuqaal casri ah oo qurxoon, birta dusha sare waxay isticmaashaa wadar dhan 70 tan oo bir ah. Boos-goosad ayaa sidoo kale laga fuliyay hareeraha marinka.
Xaafadda Kabaoğlu Dr. Biyaca birta ee laga dhisay Baki Komsuoğlu Street waxaa lagu dhisay laba jeer oo kor u qaada. Dhererka xad-dhaafka waa 34, ballacku waa 3, dhererka ka soo baxa wadada waa xNUMX mitir. Gawaarida casriga ah waxay meesha ka saari doontaa yaraanta gaadiidka lugta ee gobolka. Dadka iyo ardayda ku nool gobolka, marka la dhammaystiro mashruucu ma la kulmi doonaan dhibaatooyin ka yimaada xaaladaha xilliyada.
Selendi wuxuu Noqday Magaalo Casri ah
Kobanheegan oo ah "baska ugu roon"
Baabuurka cusub ee burcadbadeedka Bursa waa mid casri ah
Baabuur farsamo oo casri ah oo u socda Bursa
Nidaamka xadiidka fudud ee Austria ayaa hadda casriga ah
Tareenada Budapest waxay hadda yihiin kuwo casri ah
Buundada Yenidamlar waa la casriyeeyay
Professor Dr. Wadada Baki Komsuoğlu
Dhibaatooyinka ka jira garoonka diyaaradaha Istanbul ma dhamaan doonaan
Gaadiidka tooska ah ee Gölcük ilaa tozmit